I-UK sele iyamkele iApple Pay ukuhlawulela ezinye iinkonzo zikarhulumente | IPhone iindaba
Ngexesha lenkomfa ngo-Matshi 25, apho iApple yazisa inkonzo yayo yevidiyo Apple TV +ukongeza kwi Apple Arcade y Apple Card Phakathi kwezinye, inkampani kaTim Cook ibhengeze ukuba isasebenza ekwandiseni iApple Pay kwaye phambi kokuphela kwalo nyaka, izakubakhona kumazwe angama-40.
E-Spain inani leebhanki ezihambelana ne-Apple Pay likhulu, nangona kunjalo, alikasasazeki kangangokuba urhulumente uyamkele ukuba ahlawulele ezinye zeenkonzo, into esele iqale ukwenziwa ngurhulumente wase-Bhritane, ethi yona iiyure ezimbalwa ikuvumela ukuba uhlawule ukuya kuthi ga kwiinkonzo zakho ezikwi-intanethi ngeApple Pay.
Ngokwe-ITV, iwebhusayithi ye-gov.uk ikuvumela ukuba wenze iintlawulo kwi-Intanethi nge-Apple Pay kwezi nkonzo zilandelayo: Iinkonzo zokuNgena kwiHlabathi liphela, ukuveza kunye nokujonga iinkonzo ezingaphandle, iNkonzo ebhalisiweyo yabahambi kunye neNkonzo ye-Visa Visa Waiver Service. Inkxaso kurhulumente wase-Bhritane kwi-Apple Pay ayipheleli apho, kwaye ngokwendlela, Iya kwandiswa iye nakwezinye iinkonzo zalapha ekhaya ukongeza emapoliseni ekupheleni konyaka.
Urhulumente wase-Bhritane usungule iqonga le-Intanethi elikwi-gov.uk elongeza kuphela inkxaso kwi-debit kunye namakhadi etyala. Ukwandiswa kweApple Pay kuvumela abasebenzisi beApple ukuba bongeze ukhuseleko xa behlawula kwi-Intanethi, okoko akufuneki babelane ngeenkcukacha zabo zekhadi letyala nangaliphi na ixesha.
Ngokuka-Mphathiswa u-Oliver Dowden, bongeze inkxaso kwi-Apple Pay ye ukunciphisa ubuqhetseba kwaye ngaloo ndlela kuququzelelwe intlawulo kubasebenzisi nge-intanethi. I-Apple Pay okwangoku iyafumaneka kumazwe angaphezu kwama-30: iJamani, iSaudi Arabia, iAustralia, iBrazil, iBelgium, iCanada, iChina, iDenmark, iFinland, iFrance, i-Hong Kong, i-Ireland, i-Isle of Man, i-Guirney, i-Itali, iJapan, iJersey, i-Norway. , ENew Zealand, eRashiya, ePoland, eSan Marino, eSingapore, eSpain, eSwitzerland, eSweden, eTaiwan, eUkraine, eUnited Arab Emirates, eUnited Kingdom, eCzech Republic, eUnited States naseVatican City.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » I-UK sele iyamkele iApple Pay ukuhlawulela ezinye iinkonzo zikarhulumente
Uhlalutyo lweSikhululo seSiseko seNOMAD, itshaja engenazingcingo enomda kwimfezeko